Uyilo : UVoletta Beletskaya
Ifoto : UDmitry Korolko
Isitayela : Elizabeth Yakhno
Isiqalo sokhuni sokhuni ngobukhulu be-20 x 20 cm
I-clope crepe-satin pistachio
I-Fabric crepe satin enobuhle beentyatyambo
I-sequins ye-cyclamen, i-marsh ne-lemon zezimbali
Idibhodibhodi enomgca we-20 x 20 cm
Ikhadibhodi ethintekileyo ngobukhulu be-23 x 23 cm
Izixhobo: Ifreyimu yokugcoba, umpu weglue
1. Umbala wePistachkovy usasazeka kwitafile, ubeke ubuso. Phezulu kwendwangu, faka isakhelo sijongane. Ukusebenzisa isibhamu sokubambelela, shenxisa intsimbi kwicala elinye kwicala, ngokuchaseneyo. Ngokufanayo, bhuqa intsimbi phezu kwamacandelo amabini asele. Nciphisa intsimbi engaphezulu. Vula ifreyimu ngaphesheya. Izikrele ngaphakathi zikwenza umgodi kwaye zinqumle umgca wecala kwiikhonkco zangaphakathi zefreyimu, ungayinqumli kwiingqungquthela ze-0.2-0.3 cm. Bend uze ubambe "ikhonkco" kwendwangu emva kwesikimu, ulula ngokulula. Khawukhawuleze.
2. Yibangele intsimbi kunye nomhlobiso weentyatyambo kwaye uyifake kwisakhelo. Ukusebenzisa i-pajetok, khetha ezinye iinkalo zephrofayili kwindlela. Ukulungisa i-solitaire yokuqala, susa inaliti kunye nentambo kwicala langaphambili lendwangu ngokusebenzisa umgodi kwi-sequin. Ngemva yentsalane, faka i-sequin kumacala omabini. I-paillette yesibini ifakwe ngasemva kweyokuqala, uyigubungele ngendlela efanayo, njl njl. Iipalettes zombala we-marsh khetha umqolo weqabunga, i-cyclamen-yenza izibhengezo kwiintyatyambo.
3. Thatha i-sequin enemibala kwaye ukhethe phakathi kwentyatyambo enkulu. I-Sequins kufuneka ifakwe kwi-chain of parts. Ukwenza oku, susa inaliti kunye nentambo kwicala eliphambili lendwangu ngokusebenzisa umgodi kwi-sequin kwaye, ukulungisa kuphela kwicala elinye, udwebe inaliti kufuphi nomgca we-sequin yokuqala kunye nomtya olandelayo. I-sequin nganye elandelelanayo kufuneka ilungiselelwe ngendlela enokuba iguqa enye yangaphambili. Ukuthungca i-sequin nge-"mbuyisela inaliti", ukuyibeka kwindawo yokuhamba kwaye ihambele kwiziko, uqedele iphethini. Susa ityhidi eboyiweyo kwisakhelo sokugcoba kunye nesinyithi ukusuka kwicala elingalunganga.
4. Ukusebenzisa ibhobho yeglue, bhuqa idayu eboshwe ngeeququ kwikhadibhodi edibeneyo. Nciphisa intsimbi engaphezulu. Faka idibhodi ehlanganiswe kwisakhelo. Ngekhadibhodi eninzi, vala emva kwepaneli, uyilungise ngeglue elishisayo. Njengokuzila ukudla, gcoba umgca omncinane we-tape kwikhadibhodi.
Iphaneli eneemibala enokuzenzekelayo iboshwe ngeetronbhoni ze-satin. Ukwenza i-peony kwi-ribbon, thabatha i-30 cm ye-satin ibhondi kunye nesiqingatha kunye nomgca we-fold, udibanise kumgca. Gcina omnye umgca wetheyipu kwintsimbi. Gcwalisa i-tape ngokuvuthayo, okwenza izibonda zokukhahlela kwixesha eliphakathi kwe-0.3-0.4 cm. Ukuze wenze i-rose, ufake i-snowflake eneemitha ezintlanu, phakathi kwendlela edibanisa umgca we-tape. Omnye umgca we-tape ufakwa kwi-inaliti ene-eyelet enkulu kwaye uyihudule, ukuphazamisa ngaphezulu nangaphantsi kweqhwa leqhwa elikhawulezayo. Yenza imibala emininzi kwaye uzalise ukubunjwa ngesicelo se-thermo-ibhentshi edibeneyo.
Ukuba uthatha isigqibo sokwenza ukudansa kwesisu
UGanesha - unkulunkulu waseIndiya wobuninzi nobulumko kwi-feng shui
Iinguqu ze-hormone ezinxulumene nobudala
I-Saladi kunye namaqanda olwandle kunye ne-otv
Indlela yokulahla i-burrs kwiminwe yakho?
Kutheni i-lymph nodes yavutha?
Isipinashi ethosiweyo negalikhi